Kpido: mgbasa ozi mmekọrịta
Ikekwe nke a kwesịrị infographic nwere ike ịbụ otu ibu nkwanye… ka ndị na-agụ iji tọghata! N'ụzọ doro anya, anyị nwere ntakịrị ihere na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ede ọdịnaya dị omimi, ọ bụghị inyocha isi ndị ahịa ha, ma ghara ịmepụta usoro ogologo oge iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ banye ahịa. M na-aga nyocha na nke a sitere n'aka Jay Baer bụ onye gosipụtara na otu blog post na-efu ụlọ ọrụ $ 900 na nkezi. Jikọtara nke a na eziokwu 80-90% niile
Ekwenyesiri m ike na mmadụ na-ajụ ajụjụ ndị a, mana m ga-ejide ya na agbanyeghị n'ihi na achọtaghị m ha. M sonyeere Ello n'isi mmalite - ekele enyi m na onye ahịa ibe m na-eri ahụ, Kevin Mullett. Ozugbo, n'ime obere netwọkụ ahụ m na-agagharị wee chọpụta ụfọdụ ndị dị ịtụnanya nke m ahụtụbeghị mbụ. Anyị malitere ịkekọrịta ma kwuo okwu… ọ dịkwa ịtụnanya. Otu onye kwudịrị na Ello nwere ihe ọhụrụ ahụ